Niantso ny Global Voices hamotsorana tsy misy hatak’andro ireo mpiasan’ny fampitam-baovao antserasera sy ny mpikatroka nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Niantso ny Global Voices hamotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpiasan'ny fampitam-baovao antserasera sy ny mpikatroka nogadraina
Toa-javatra tahaka itony no tsara ananana namana ifandraisana hatrany
Voadika ny 09 Marsa 2019 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, русский, Deutsch, Shqip, 繁體中文, 简体中文, Dansk, English
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny janoary 2015)
Zelalem, Edom, ary Befeqadu, mpanoratry ny Global Voices telo migadra any Ethiopia.
Namoaka fanambaràna ny vondrom-piarahamonina Global Voices manameloka ny fanagadrana ireo bilaogera, mpiasan'ny fampitam-baovao ary mpikatroka an-tserasera manerana izao tontolo izao. Niaraha-namaky nandritra ny fanokafana ny Vovonan'ny Median'Olom-pirenena Global Voices taona 2015, tao Cebu, Filipina ny anaran'ireo olona tsirairay nogadraina tany amin'ny firenena tahaka an'i Shina, Bahrain, ary Meksika. Manamafy ny anjara adidin'ny Global Voices hisian'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fanohanany amin'ny famoahana azy ireny hivoaka ny fonja ny fanambaràna.
Izahay, mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, no miantso ny hanafahana avy hatrany ireo mpikatroka an-tserasera, mpiasan'ny fampitam-baovao mahaleotena ary bilaogera rehetra manerana izao tontolo izao gadrain'ny governemanta na hazonin'ny mahery fihetsika. Tahaka ireny olona ireny—izay maro amin'izy ireo no namana sy mitovy asa aminay—dia inoanay ny zo sy ny herin'ny fanehoana malalaka hitarika fanovana, hampihevitra fiaraha-miasa sy hamaha fifandirana. Tsy ho tontosa anefa izany fahefana izany raha tsy misy ny fiarovana ny fahafaham-pitenenan'ny olona manerantany.
Ireto manaraka ireto moa ny sasany amin'ireo olona miaritra ny famoretana eo am-pelatanan'ny governemantany na ireo mpiantsehatra matanjaka hafa afa-manangana hery miaramila. Mbola misy ny maro hafa. Tsy afa-mangina izahay—ary tokony ho tahaka izany koa ianareo. Miangavy anareo izahay hanatevin-daharana hitaky amin'ny governemanta rehetra hanatontosa ny andraikiny araka ny Fanambaràna manerantany ny zon'olombelona: hiaro sy hanaja ny zon'ireo olona ireo.
Youcef Ould Dada
Kunchok Tsephel Gopey Tsang, Chomei
Memetjan Abdulla, Freelance
Dokru Tsultrim (Zhuori Cicheng)
Gheyrat Niyaz (Hailaite Niyazi), Uighurbiz
8 Facebook users
Abdullah Fairouz Abdullah Abd al-Kareem
Bassel Khartabil (Safadi)
Dang Xuan Dieu
Hong Le Tho
1 ora izayKaraiba
Andao handehandeha an-tongotra! Sarin'ireo lalana sasany mahafinaritra indrindra ao Karaiba
3 ora izayBlaogim-Piarahamonina GV
Mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices hizara tononkalo amin'ny fiteny indizeny
1 andro izayAzia Atsimo